ओली समूहमै सुरु भयो बिद्रोह, यी नेताले सुरु गरे ओली बाहेकको समीकरण बनाउन ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ओली समूहमै सुरु भयो बिद्रोह, यी नेताले सुरु गरे ओली बाहेकको समीकरण बनाउन ! - खबर प्रवाह
ओली समूहमै सुरु भयो बिद्रोह, यी नेताले सुरु गरे ओली बाहेकको समीकरण बनाउन !
एमालेको दसौं महाधिवेशनको मुखमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहभित्रै पदाधिकारीलाई लिएर ध्रुवीकरण भएको छ। ओलीलाई सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष बनाउन सबै तयार भए पनि अन्य पदाधिकारीलाई लिएर ध्रुवीकरण देखिएको हो ।
पदाधिकारीमा ओली पक्षका नेताहरू ईश्वर पोखरेल,शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतको एउटा र विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतको अर्को समूह बन्ने सम्भावना देखिएको छ।महासचिव पोखरेल र नेम्वाङ दुवैले प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधि र उपलब्ध अगुवा नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
ओलीपछिको पदमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका नेम्वाङले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका हुन्। महासचिव भएका नाताले पोखरेलले पनि भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। ‘ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष राजी छन् तर पदाधिकारीमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसम्मै यो समूहमा धु्रवीकरण भएको आभास हुन्छ।
दुवै पक्षले आआफ्नो समूहको तर्फबाट यतिबेला प्रदेश–प्रदेशमा समन्वय गरिरहेका छन्’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सबैलाई सहज भएको छ। दसौँ महाधिवेशनमा महासचिवको पहिलो हकदार रहेका हालका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुने र उनी नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। तर उनले आफू कुन पोजिसनमा उठ्ने भन्नेबारे केही बताएका छैनन्।
‘साथीहरूसँग छलफलमै छु’,उपमहासचिव पौडेलले भने। उनका अनुसार आकांक्षीहरू धेरै भएकाले समेट्न समस्या भैरहेको छ। तर उनले पदाधिकारीमा के कसो हुन्छ भन्नेबारे केही बताएनन्। आफूलाई सचिवभन्दा माथिको पदमा बढुवाको अपेक्षा गरिरहेका हालका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि अध्यक्षमा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन्।
तर उनले पनि आफ्नो उम्मेदवारीबारे केही बताउन चाहेनन्। ‘अब निर्धारण हुन्छ,आमसाथीहरूको चाहनाबमोजिम म अघि बढ्नेछु’,ज्ञवालीले बुधबार भने। १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमै सक्रिय रहेका र पार्टी विभाजन हुनुहुन्न तर फरक विचार र धारणा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने योगेश भट्टराईले आफूले साबिककै पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन्। ‘माथिल्लो पदमा अहिले नै चाहना छैन’,उनले भने।
१० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमा सक्रिय भएका अन्य नेताहरूले पनि साबिककै पदमा इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। तर रावलले भने अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनीहरू ओली समूहभित्रको ध्रुवीकरणलाई पनि नियालिरहेका छन्। खासगरी सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शंकर पोखरेलले महासचिवमा दाबी गरेपछि सो समूहमा ध्रुवीकरण आएको हो।
‘अहिले ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ भर्सेस देखिएको छ। यसमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल पनि विपरीत ध्रुवमा देखिए भने ओली समूहभित्र स्पष्ट विग्रह आउनेछ’, स्थायी कमिटीका अर्का एक सदस्यले भने, ‘महासचिव दाबी गरिरहेका पौडेलले नेम्बाङलाई साथ दिए भने हालका महासचिव पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन जित्न समस्या हुनेछ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव तथा सचिवमा मिलाउन भने त्यति धेरै कठिन नभएको र निर्वाचन हुँदा पनि संस्थापन पक्षले चाहेकै व्यक्ति आउने सम्भावना छ। उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीमा पूर्वमाओवादीका नेताहरू, १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमा सक्रिय भएका नेताहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण संस्थापन पक्ष अप्ठेरोमा परेको छ।
माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादु थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेतालाई पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमा सक्रिय भएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट,भीम आचार्यलगायतका नेतालाई पनि पदाधिकराीमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ।
एमाले दशौँ महाधिवेशन : संस्थापनभित्रै अघोषित दुई समूह सक्रिय, १० भाईलाई टिक्कनै मुस्किल , पूर्व माओवादीको अस्त्तिव गुम्ने खतरा
एकीकृत समाजवादीमा जान सक्छु, तर केपी रहँदासम्म एमालेमा जान्नँ : वामदेव गौतम